အလယ်အာရှ သည် အာရှတိုက်၏ ဗဟိုချက်တွင် တည်ရှိသော နေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနောက်ဖက်တွင် ကက်စပီယံပင်လယ်၊ အရှေ့ဖက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၊ တောင်ဖက်တွင် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံနှင့် မြောက်ဖက်တွင် ရုရှားနိုင်ငံ တို့အထိကျယ်ပြန့်သည်။ လက်ရှိအခြေအနေအရ အလယ်အာရှတွင် ပါဝင်သည့်နိုင်ငံများမှာ ယခင် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုမှ ကွဲထွက်လာသည့် နိုင်ငံများဖြစ်သော ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၊ ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံ၊ တာဂျစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံ နှင့် ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံ တို့ဖြစ်ကြသည်။ ရံဖန်ရံခါတွင် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကိုလည်း ထည့်သွင်းရေတွက်သည်။
အလယ်အာရှ (Central Asia)
၄၀၀၃၄၅၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ[N 1]
အလယ်အာရှသည် သမိုင်းကြောင်းများအရ နောမက် (ခေါ်) နေရာအတည်တကျမရှိ လှည့်လည်သွားလာနေသော လူမျိုးစုများ နေထိုင်ခဲ့ကြခြင်းနှင့် ပိုးလမ်းမကြီး တည်ရှိနေခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ဥရောပ၊ အနောက်အာရှ၊ အရှေ့တောင်အာရှ နှင့် အရှေ့အာရှ ဒေသများ၏ ကုန်သွယ်ရာ ဒေသတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အစ္စလမ်မတိုင်မီခေတ်နှင့် အစ္စလမ်ခေတ်ဦးပိုင်းတွင် အလယ်အာရှသည် အီရန်လူမျိုးများ ကြီးစိုးရာဒေသ ဖြစ်ခဲ့သည်။ တားကစ်ခ်လူမျိုးများ ရောက်ရှိလာပြီးနောက် အလယ်အာရှသည် ယင်းလူမျိုးတို့၏ အိမ်သဖွယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့အတွက်ကြောင့် အလယ်အာရှကို ရံဖန်ရံခါ တာကီစတန်ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။
၁၉ ရာစုအလယ်ပိုင်းမှ ၂၀ ရာစုအကုန်အထိ အလယ်အာရှ၏ ဒေသအများစုမှာ ရုရှားအင်ပါယာ တွင်ပါဝင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု အဖြစ်တည်ရှိခဲ့သည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း (၂၀၁၂)
ကာဇက်စတန် ၂,၇၂၄,၉၀၀ ၁၇,၉၄၈,၈၁၆ ၆.၃ ၁၉၆,၄၁၉ အက်စတာနာမြို့ ကာဇတ်ဘာသာ, ရုရှားဘာသာ
ကာဂျစ္စတန် ၁၉၉,၉၀၀ ၅,၆၀၄,၂၁၂ ၂၇.၈ ၆,၄၇၃ Bishkek ကာဂျစ်ဘာသာ၊ ရုရှားဘာသာ
တာဂျစ်ကစ္စတန် ၁၄၃,၁၀၀ ၈,၀၅၂,၅၁၂ ၅၅.၉ ၇,၅၉၂ ဒုရှန်ဗေမြို့ တာဂျစ်ဘာသာ၊ ရုရှားဘာသာ
တာ့ခ်မင်နစ္စတန် ၄၈၈,၁၀၀ ၅,၁၇၁,၉၄၃ ၁၀.၅ ၃၃,၆၇၉ အက်ရှ်ကဘက်မြို့ တာ့ခ်မန်ဘာသာ
ဥဇဘက်ကစ္စတန် ၄၄၇,၄၀၀ ၃၀,၁၈၅,၀၀၀ ၆၇.၅ ၅၁,၁၆၈ တက်ရှကင့်မြို့ ဥဇဘက်ဘာသာ
အာဖဂန်နစ္စတန် ၆၄၇,၅၀၀ ၃၁,၁၀၈,၀၇၇ ၄၈ ကဘူးလ်မြို့ ပက်ရှ်တိုဘာသာ၊ ဒါရီဘာသာ
Silkroad Foundation, Adela C.Y. Lee။ Travelers on the Silk Road။ ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Shepherd, William (1923)။ Historical Atlas။ New York: Henry Holt and Company။
Polo၊ Marco; Smethurst၊ Paul (2005)။ The Travels of Marco Polo။ p. 676။ ISBN 978-0-7607-6589-0။
Andrea, Bernadette. “Ibn Fadlan’s Journey to Russia: A Tenth‐Century Traveler from Baghdad to the Volga River by Richard N. Frye: Review by Bernadette Andrea”. Middle East Studies Association Bulletin, Vol. 41, No. 2, 201-202. Middle East Studies Association of North America (MESA).
The World Factbook။ ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
အလယ်အာရှရှိ ငါးနိုင်ငံ၏ ဧရိယာစုစုပေါင်း ဖြစ်သည်။